१० असार २०७८, बिहीबार ०५:५३ PM
१७ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०८:५६ मा प्रकाशित
२०७८ जेष्ठ १७ साेमबार, काठमाडौं । नेपालमा नयाँ कोरोना संक्रमित भेटिनेको संख्या घट्दो क्रममा देखिएको छ । पछिल्ला केही दिनयता दैनिक संक्रमित भेटिनेको संख्या निरन्तर घट्दै गएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अघिल्लो हप्ताको तुलनामा यो हप्ता कोभिड संक्रमितको संख्यामा कमि आएको पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङका क्रममा जनस्वास्थ्य तथा सामुदायिक कार्यक्रम विभाग, धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक डा.विराज कर्माचार्यले अघिल्लो हप्ताभन्दा यो हप्ता झण्डै १७.५ प्रतिशतले कोभिड संक्रमितको संख्यामा कमि आएको जानकारी दिनुभयो ।
६ वटा प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गए पनि गण्डकी प्रदेशमा भने विगतको हप्ता भन्दा ५०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तर समग्रमा हेर्दा नयाँ संक्रमित भेटिनेको संख्या घट्दो क्रममा रहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर घटेसँगै मुलुकका अधिकांश जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञा अब के हुन्छ भन्ने कौतुहलता धेरैको मनमा छ । संक्रमणको जालो भत्काउन भन्दै सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहितका स्थानमा निषेधाज्ञालाई थप कडा पारेको छ । तर विज्ञहरुले भने अब निषेधाज्ञा थप गरेर नागरिकलाई दुःख दिन नहुने राय प्रस्तुत गरेका छन् ।
इपिडोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख डा. बाबुराम मरासिनीले अब निषेधाज्ञा हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । धान रोपाईँ गर्नुपर्ने बेला किसानलाई घरभित्रै थुन्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो । संक्रमण कहाँबाट फैलियो त्यसको श्रोत पत्ता लगाएर नियन्त्रणका उपाप अपनाउनुपर्ने तर निषेधाज्ञाको भने विकल्प खोजिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
डा. मरासिनीले निषेधाज्ञा हटाउनुपर्छ भन्दैमा एकै पटक सबैथोक खुला भने छाड्न नहुने बताउनुभयो । अब कोरोना सकियो भन्ने भ्रम पालेकै कारण दोस्रो लहरले दुःख दिएको कुरा बिर्सन नहुने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले भिडभाड कम गर्नका लागि अनलाइनबाटै सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उहाँको माग छ । सरकारी कार्यालयहरुले अनलाइन पद्धतिबाट काम गर्ने विधि अपनाए संक्रमण फैलिनबाट रोक्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
अर्का जनस्वास्थ्यविद डा. बाशुदेव पाण्डेयले भने निषेधाज्ञा खुकुलो पार्न अहिले नै हाैसिहाल्ने बेला भैनसकेको बताउनुभयो। उहाँले अझै कम्तीमा दुई हप्ताको अवस्था हेरेर निषेधाज्ञा हटाउनेबारे निर्णय लिनुपर्ने बताउनुभयो । संक्रमण घट्दै गए पनि मृत्युदर घट्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । तर कोरोना बाहेक अरु समस्याले पनि मानिसहरुलाई दुःख दिन थालेको कुरालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । सबै कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै निषेधाज्ञा बिस्तारै खुकुलो पार्दै जानुपर्ने उहाँको मत छ ।
अघिल्लो पटक कोरोना संक्रमितको संख्या घटेसँगै सरकारले अब कोरोना हराएझैँ गरी निषेधाज्ञा खुकुलो पारेपछि दोस्रो लहरले ठूलो क्षति हुने गरी आक्रमण गरेको हो ।
यसपटक पनि संक्रमित घट्न थाले भन्दै निषेधाज्ञालाई पूर्ण रुपमा हटाए अर्काे महाभूल हुने छ । त्यसैले संक्रमण धेरै रहेका स्थानमा निषेधाज्ञालाई थप कडा पार्ने र संक्रमित नरहेका स्थानमा बिस्तारै जनजीवन सामान्य पार्ने गरी सरकारले कदम चाल्नुपर्छ ।